कर्णालीमा भाइरस र गैरजिम्मेवारी
बाजुरा, डोल्पा, हुम्लामा रुघा, खोकी, जरो, झाडापखाला चल्यो । महिनौैंपछि सरकारले औषधि र स्वास्थ्यकर्मी पठाएर परीक्षण गरेपछि पत्ता लाग्यो– इन्फुएन्जा ए भाइरस हो, यसको रोकथाम हुन्छ अव ।
यति कुरा समयमै गरिदिएको भए झण्डै ३ दर्जन मान्छेको ज्यान जाने थिएन । कर्णालीजस्ता दूरदराज ठाउँहरुमा यसैगरी महामारी चलिरहन्छ र व्यापक दबाब परेपछि बल्ल सरकार जान्छ, प्रवन्ध मिलाउँछ र उपचार दिन्छ । मान्छेले पाउनै पर्ने न्यूनतम प्राथमिकता हुन्– स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी र विजुली । यत्ति कुराको प्रवन्ध गर्न पनि नसक्ने सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्छ, मान्छ । तर लोकतन्त्रमा हुनै पर्ने जनताप्रतिको जवाफदेहीता पूरा गर्न सधैं कञ्जुरी गर्छ, दयालाग्दो छ लोकतन्त्र ?
हालै भारतको दिल्लीमा चुनाव भयो । आम आदमी पार्टीले तेश्रोपल्टको चुनावमा पनि बाजी मारेको छ । आम आदमी पार्टीलाई यसरी चुनाव जिताउने जनता आम आदमी पार्टीकामात्र थिएनन्, भाजपाका कार्यकर्ता र नेता समेत थिए । उनीहरु भन्छन्– केन्द्रमा भाजपाको सरकार छ, त्यो हाम्रो पार्टीको सरकार हो । तर दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, विजुली दिएको छ, त्यसमा पनि व्यापक छुट दिएको छ । हामीले दिनुहुँ जसो जनसम्पर्क गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरुमा भोलि भनिदैन, घूस नलिई काम गरिदिन्छन् । हामीले जे खोजेको हो, त्यो दिएको छ त्यसैले हामी भाजपाका कार्यकर्ता हौं तर दिल्लीमा आम आदमी पार्टीलाई भोट दियौं, दिइरहनेछौं ।
जनताले खोजेको दिएपछि जनताले मन पराउने रहेछन् । आस्था अर्को पार्टीतिर छ, भोट अर्कोतिर । राम्रो कामको मूल्यांकन गर्ने क्षमता जनतामा हुनपर्छ, तवमात्र जनताले न्याय गर्छन्, शासकले न्याय गर्न बाध्य हुन्छ । त्यही कुराको कमी छ नेपाली जनतामा । जनताले सहीदिएपछि नेताले हेप्नु स्वभाविक हो । नेताले हेपेकामात्र छैनन्, जनताको अपेक्षा र चाहनामाथि घोडा नै चढेका छन् ।
कर्णालीमा चलेको मौसमी महामारीमा महिनौं सरकारले ध्यान दिएन । सरकारप्रति जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि त बढेको छ तर चुनाव आयो भने आफूलाई साथ नदिने, जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, विजुलीमात्र होइन, खाद्यान्न संकट र भ्रष्ट प्रशासनमार्फत जनतामाथि अन्याय गर्ने गराउने पार्टीकै नेतालाई चुनाव जिताउने गर्छन् जनताहरु । अनि जनताको कुरा नेताले, सरकारले र प्रशासनले किन सुन्छ ?
अव जनता सचेत हुनुपर्छ । जनता सचेत नभए अझ दुःख पाउनेछन् ।